Easy in ay marti Kediska Your Pub la weedhood Software
> Resource > Talooyin > Easy in ay marti Kediska Your Pub la weedhood Software
Dad badan ayaa jecel in ay isu tagaan si ay kulan kedis ah ku meel dadweynaha. Dhacdooyinka sidaan oo kale waxaa loo yaqaan Kediska Habeenada ama yacni Habeenada . Su baar ayaa dabooli karaan tiro balaadhan oo ah mawduucyo iyo xeerarka. Sida ciidan kedis baar, waxa aad raadineyso qaab fudud oo ay samatabbixin su'aalaha si dableeyda kedis ah oo ay la socdaan natiijada? Haddii ay sidaas tahay, software gaare kedis aad samayn karto qaar ka mid ah caawimaad.
Qorshaynta Kediska Pub ama Kediska Night ma aha shaqo fudud. An dhacdo kedis celcelis ahaan waxay u baahan tahay 60 ama ka badan oo su'aalo kedis. Si kor loogu qaado waayo-aragnimo kedis ah, su'aalaha u baahan in la kala duwanaayeen, ma ahan nooc su'aasha ah, saamaynta bandhigay ama ku jira sawir ah, iyo ka codsanaynaa ugu tuurayo kedis aad.
Su'aalaha Original ama su'aal aan Original
Si aad kedis ah oo dhan su'aalo kedis asalka ah, aad u hesho in ay ku qaataan wakhti badan si ay baaritaan su'aal kasta oo aad doonaysid in aad weydiiso oo ay jawaab. Haddii aadan u baahnayn su'aalo si buuxda asalka ah, ilaha bilaashka badan oo online kedis baar waxaa laga heli karaa:
Paper ku salaysan Kediska ama Flash Kediska
Marka su'aalaha ay diyaar u yihiin, off Dabcan waxaad iyaga ku daabacan kartaa waraaqaha. Waxaa ka hooseeyo-carbon iyo hab fiican si ay u abuuraan kedis habeenkii aad - wareejinta kedis ah in file Flash kartoon ah iyo is-dhexgal oo tus kooxaha dableeyda ee kediska. Taasi waxa Flash software gaare samayn karaa. Shaki kuma jiro in Flash kedis badan yahay rafcaanka karo dad badan in ay qaataan hawlaha kedis baar ah.
By jidkii, software gaare kedis waa awood ku filan karo inuu Abuuro wax su noocyada ugu caansan sida kedis badan oo la doortay, kedis tallaabadaas, kedis isku xigxiga, kulul kedis kaalinta, iwm
Kediska Text ama Multi-warbaahinta kedis
Kedis Text idin ​​tusiyo su'aalaha qaar ka mid ah erayada Cad ah. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah su'aalaha adag ama image, in kuma filna. Maxaa dhacaya haddii aad ku dari kartaa sawir, cod, ama xataa sida video sawirrada ee su'aalahaaga? Kediska sidan oo kale waa in ay noqdaan qabow. Iyadoo Wondershare QuizCreator , waxaad si fudud u geli karo waxyaabaha kor ku xusan si aad kedis dheeraad ah oo ku kalifay.
Image : muujinaya waxyaabaha ka jira fursado su'aal ama jawaab. Tusaale ahaan waa nin ee sawirka kuma? Dhig Obama ayaa sawir ka yar su'aasha.
Audio :. muujinaya su'aasha ama ka dhigo qayb ka mid ah su'aal Tusaale ahaan waxa magaca this song (ka Lady Gaga)? Dejinta clip ka audio ee Lady Gaga ayaa turub Waji su'aasha.
Video :. tusiya macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan su'aasha Tusaale ahaan shirkadda sababay daataan saliidda ee Gacanka Mexico ah?
Haddii aad xiisaynayso in la abuuro aalaha Flash sida loogu aalaha aad habeen, wax dheeraad ah oo ku saabsan software kedis QuizCreator >>
Sida caadiga ah su'aalo kedis baar ah qaab Flash Lagu arki karo borojektar ku xiran your computer. Your qaybiyo waraaqaha jawaab ka qaybgalayaasha waxana aad waydiisaa in aad qorto jawaabaha iyo gacanta waraaqaha aad. Markaasaan idinku xukumi doonaa kuwa idin ​​siiyey jawaabo qumman. Geedi socodka codadka adag, soo maaha? The QuizCreator Online yimaado la QuizCreator adeega bixiyaan si ay ula socdaan natiijooyinka kedis ah oo fasalka jawaabta online. Haddii ay jiraan computer ku filan ama dhabtaada dushooda gurigaaga yihiin, weydii in ay qaado su'aalaha ku online, in idinka badbaadin doonaa, dhibaato badan.
Siyaabaha la taaban karo iyo Kediska Software Kan sameeyey, si ay u samee Online Kediska
Samee Multiple Choice Kediska la Multiple Kan sameeyey Choice Kediska
Sida loo Block iyo barkinta Messages Facebook on Facebook.com
Mid ka mid ah Riix si aad u bilowdo iyo bilaabin isticmaalka Facebook Timeline
Sida loo Play PowerPoint Madasha on huriyaan dab
Waxyaabaha aad ogaanaysid Waa saabsan shidin taabashada
Laba Siyaabaha Samee Kediska Flash ah
Samee Flash XML Gallery iyo XML Muqaal